2 Beresosɛm 29 | Intanɛt So Bible| Wiase Foforɔ Nkyerɛaseɛ
2 Beresosɛm 29:1-36
29 Hesekia+ bedii hene no, na wadi mfe aduonu anum, na odii hene mfe aduonu akron wɔ Yerusalem. Ne maame din de Abia a ɔyɛ Sakaria ba.+ 2 Na ɔyɛɛ nea ɛteɛ Yehowa ani so+ sɛnea ne nana Dawid yɛe no ara.+ 3 Ɔno de, n’ahenni afe a edi kan, ɔsram a edi kan no, obuebuee Yehowa fie apon, na ɔyɛɛ no yiye.+ 4 Na ɔmaa asɔfo ne Lewifo no bae, na ɔboaboaa wɔn ano wɔ petee mu+ wɔ apuei fam. 5 Na ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Lewifo, muntie me. Munnwira+ mo ho, na monyɛ Yehowa, mo agyanom Nyankopɔn fie no kronkron, na munyiyi nea ɛho ntew mfi kronkronbea hɔ.+ 6 Yɛn agyanom fomee,+ na wɔyɛɛ Yehowa, yɛn Nyankopɔn ani so bɔne;+ wogyaw no+ na woyii wɔn ani fii Yehowa ntamadan so,+ na wɔdan wɔn akyi kyerɛɛ no. 7 Wɔtotoo abantenten no apon+ nso mu, na wodunnum akanea+ no; wɔanhyew aduhuam,+ na wɔammɔ ɔhyew afɔre wɔ kronkronbea hɔ amma Israel Nyankopɔn.+ 8 Enti Yehowa abufuw+ baa Yuda ne Yerusalem so, na ɔde wɔn yɛɛ ahoyerawde+ ne ahodwiriwde+ ne hwiremabɔde,+ sɛnea mo ara mo ani tua yi. 9 Eyi nti yɛn agyanom totɔɔ nkrante ano,+ na wɔde yɛn mmabarima ne yɛn mmabea ne yɛn yerenom kɔɔ nkoasom mu.+ 10 Afei aba me komam sɛ me ne Yehowa, Israel Nyankopɔn bɛyɛ apam+ na n’abufuhyew afi yɛn so. 11 Enti me mma, monnhome,+ efisɛ mo na Yehowa apaw mo sɛ munnyina n’anim nsom no+ na monyɛ n’asomfo daa+ na mommɔ ɔhyew afɔre mma no daa.”+ 12 Ɛnna Lewifo+ yi sɔree: Kohat asefo+ mu, Amasai ba Mahat ne Asaria ba Yoel; Merari asefo+ mu, Abdi ba Kis ne Yehalelel ba Asaria; Gerson asefo+ mu, Sima ba Yoa ne Yoa ba Eden; 13 Elisafan asefo+ mu, Simri ne Yeuel; Asaf asefo+ mu, Sakaria ne Matania; 14 Heman asefo+ mu, Yehiel ne Simei; Yedutan asefo+ mu, Semaia ne Usiel. 15 Afei wɔboaboaa wɔn nuanom ano, na wodwiraa+ wɔn ho, na sɛnea ɔhene no nam Yehowa asɛm+ so de ahyɛde mae no, wɔbae sɛ wɔrebɛtew Yehowa fie no ho.+ 16 Na asɔfo no baa Yehowa fie hɔ bɛtew ho, na woyiyii nneɛma a ɛho ntew a wohui wɔ Yehowa asɔrefie hɔ no nyinaa baa Yehowa fie adiwo.+ Na Lewifo no nso gyei, na wɔde fii adi kɔɔ Kidron subon+ no ho. 17 Wofii ase tew ho ɔsram a edi kan no da a edi kan, na ɔsram no da a ɛto so awotwe no, wɔbaa Yehowa fie abantenten+ no ho; wɔde nnafua awotwe na ɛtew Yehowa fie no ho, na wowiee adwuma no ɔsram a edi kan+ no da a ɛto so dunsia. 18 Wowiei no, wɔbaa Ɔhene Hesekia anim bɛka kyerɛɛ no sɛ: “Yɛatew Yehowa fie no nyinaa ne ɔhyew afɔremuka+ ne ɛho anwenne+ nyinaa ho, ne ɔpon+ a wɔde paanoo a wɔde kyerɛ gu so ne ɛho anwenne+ nyinaa. 19 Na anwenne+ a Ɔhene Ahas+ di hene no oyiyi fii hɔ n’amumɔyɛ+ mu no, yɛasiesie atew+ ne nyinaa ho, na ɛwɔ Yehowa afɔremuka no anim.” 20 Na Ɔhene Hesekia+ sɔree anɔpahema+ kɔboaboaa kurow no mu mpanyimfo+ ano, na wɔbaa Yehowa fie hɔ. 21 Nea wɔde bae ne anantwinini+ ason, adwennini ason, nguammaa anini ason, ne mpapo ason a wɔde bɛbɔ bɔne afɔre+ ama ahenni no ne kronkronbea hɔ ne Yuda. Na ɔka kyerɛɛ Aaron asefo, asɔfo+ no, sɛ wɔmfa mmɔ afɔre wɔ Yehowa afɔremuka no so. 22 Enti wokunkum+ anantwi no, na asɔfo no gyee mogya+ no de petepetee+ afɔremuka no so; ɛno akyi no, wokunkum adwennini+ no, na wɔde mogya no petepetee+ afɔremuka no so, na wokunkum nguammaa anini no, na wɔde mogya no petepetee afɔremuka no so. 23 Afei wɔde bɔne afɔre ho mpapo+ no baa ɔhene ne bagua no anim na wɔde wɔn nsa guu wɔn so.+ 24 Ɛnna asɔfo no kunkum wɔn na wɔde wɔn mogya no bɔɔ bɔne afɔre wɔ afɔremuka no so de pata maa Israel+ nyinaa, efisɛ Israel+ nyinaa na ɔhene kae sɛ wɔmmɔ ɔhyew afɔre ne bɔne afɔre no mma wɔn.+ 25 Saa bere no nyinaa na wama Lewifo+ no abegyinagyina Yehowa fie hɔ, na wokurakura nnawuta,+ asanku+ ne asankuten+ sɛnea Dawid+ ne ɔhene dehufo Gad+ ne odiyifo Natan+ hyɛe no, efisɛ Yehowa nam n’adiyifo no so na ɔhyɛe.+ 26 Enti Lewifo no kurakuraa Dawid nnwonto nneɛma+ no gyinagyinaa hɔ, na asɔfo no nso kurakuraa ntorobɛnto.+ 27 Afei Hesekia kae sɛ wɔmmɔ ɔhyew afɔre no afɔremuka no so; bere a wofii ase sɛ wɔrebɔ ɔhyew afɔre no, Yehowa dwom+ ne ntorobɛnto no fii ase, na wɔhyɛn maa ɛne Israel hene Dawid nnwonto nneɛma no nnyigyei hyiae. 28 Na bere a wɔreto dwom+ na wɔrehyɛn ntorobɛnto no nyinaa na bagua no nyinaa abobɔ wɔn mu ase.+ Wɔyɛɛ saa de kosii sɛ wowiee ɔhyew afɔre no. 29 Wowiee afɔrebɔ no ara pɛ, ɔhene ne wɔn a wɔka ne ho nyinaa kotow de wɔn anim butubutuw fam.+ 30 Ɛnna Ɔhene Hesekia ne mpanyimfo+ no ka kyerɛɛ Lewifo no sɛ wɔmfa Dawid+ ne ɔdehufo Asaf+ nsɛm nyi Yehowa ayɛ. Na wɔde ahurusi+ yii no ayɛ, na wɔkotow de wɔn anim butubutuw fam.+ 31 Na Hesekia kae sɛ: “Afei moahyɛ+ mo nsam den ama Yehowa adwuma. Montwe mmɛn, na momfa afɔrebɔde+ ne aseda+ afɔre mmra Yehowa fie.” Ɛnna bagua no de afɔrebɔde ne aseda afɔre bae, na obiara a ne koma kaa no de ɔhyew afɔre+ bae. 32 Na ɔhyew afɔre a bagua no de bae no dodow si anantwi aduɔson, adwennini ɔha, nguammaa anini ahanu; wɔde eyinom nyinaa bɛbɔɔ ɔhyew afɔre maa Yehowa;+ 33 ayɛyɛde kronkron no nso, wɔde anantwi ahansia ne nguan mpem abiɛsa na ɛbae. 34 Ná asɔfo+ no sua, na wɔantumi angua ɔhyew afɔre no+ nyinaa. Enti wɔn nuanom+ Lewifo no boaa wɔn kosii sɛ wowiee adwuma no;+ wɔboaa wɔn kosii sɛ asɔfo no dwiraa wɔn ho,+ efisɛ na Lewifo no asiesie wɔn koma+ sen asɔfo no sɛ wobedwira wɔn ho. 35 Afei nso na ɔhyew afɔre+ no ne asomdwoe afɔre+ ho srade+ ne afɔrebɔ nsã+ a ɛka ɔhyew afɔre no ho no dɔɔso pii. Saa na wosiesiee Yehowa fie som no.+ 36 Ɛnna Hesekia ne ɔman no nyinaa dii ahurusi, nea nokware Nyankopɔn ayɛ ama ɔman+ no nti, efisɛ eyi nyinaa sisii ntɛm so.+
2 Beresosɛm 29